सेतोपानी बग्ने समस्या छ भने घरेलु उपचार छोडेर डाक्टरको उपचार जरुरी
मुख्य पृष्ठHealth Tips स्वास्थ्य जीवनशैलीसेतोपानी बग्ने समस्या छ भने घरेलु उपचार छोडेर डाक्टरको उपचार जरुरी
विराटनगर, २२ भदौ । महिलाहरूमा महिनावारी हुने समयमा वा लगातार योनीबाट सेतोपानी बग्ने समस्याले सताइरहेको हुनसक्छ । धेरै महिलाहरूले लाजका कारण सेतोपानी बग्ने समस्या भएको बेला डाक्टर कहाँ जान नसक्ने भएपछि विभिन्न घरेलु उपचारहरू अपनाइरहेका छन् ।
यस्ता घरेलु उपचारले स्वास्थ्यमा अझ नकारात्मक असर परेर विभिन्न पाठेघरसम्बन्धी रोगहरू निम्त्याउने गरेको हुन्छ । महिलाहरूमा देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामध्येको ‘योनीबाट सेतोपानी बग्ने’ समस्या अहिलेको चिन्ताको विषय बनेर आएको छ । प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्योति अग्रवालका अनुसार लाजका कारण यस विषयमा धेरै महिलाहरूले समस्या भए पनि डाक्टर कहाँ जान डराउने गर्छन् । कतिपय महिलाहरूले यस समस्याई सामान्य रूपमा लिएका हुन्छन् भने धेरै कम महिलाहरूले यसलाई खतरनाक मानेर उपचारका लागि डाक्टर कहाँ जाने गर्छन् ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा प्रसूति गृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले बताएअनुसार सेतोपानी बग्दैमा आत्तिइहाल्नु पर्ने हुँदैन । तर, धेरै मात्रामा गन्हाउने सेतोपानी बग्छ भने चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराइ हाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । महिलाको शरीरभित्र अण्डा बन्ने बेलामा वा फर्मुलेसन हुने बेलामा चिप्लो पानी बन्ने गर्छ । त्यसैले सेतोपानी बग्नुलाई सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ । यदि सेतोपानी बग्दा पोल्दैन, दुख्दैन, वा गन्हाउँदैन भने खासै डराउनु पर्दैन ।
तर, सेतोपानी जाँदा साह्रै गन्हाउँछ वा धेरै मात्रामा बग्ने भएर प्याड नै लगाएर हिडँनुपर्ने अवस्था आएमा वा चिलाउने तथा पोल्ने भयो भने सतर्क भएर बेलामा उपचार गराउनु पर्ने डा. गौतमले सुझाव दिएका छन् । कहिलेकाहीँ पाठेघरको भित्र समस्या आएमा, ट्युमर वा क्यान्सर भएको खण्डमा सेतोपानी बगेको पनि हुने सम्भावना हुने गर्छ । तीस वर्षभन्दा माथि पुगेको महिलामा यस्तो समस्या देखा परे तुरुन्तै पाठेघरको मुखको जाँच गरेर सतर्क रहन डा. अग्रवालले आग्रह गरेका छन् ।
डाक्टरलाई देखाउँदा सामान्य रहेको नतिजा आएमा महिनावारी रोकेसँगै सेतोपानी पछि गएर आफैँ रोकिएर जाने गर्छ । यस्ता समस्याबाट बच्न सरसफाइमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । शरीरको सरसफाइमा ध्यान दिइएन भने सेतो पानी अझ गन्हाउने, योनी चिलाउने तथा पोल्ने, पिसाब पोल्ने तथा अन्य प्रकारको संक्रमण हुन सक्छ । यस्तो बेलामा दिनहुँ नुहाएर यौनाङ्ग सफा गर्नुपर्छ ।
कम उमेरमा विवाह नगर्ने, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा यौन सम्पर्क नगर्ने, बच्चा छिट्टै नजन्माउने, महिनावारी भएका बेला यौनसम्पर्क नराख्ने, एकभन्दा बढी पुरुषसँग यौनसम्पर्क नगर्नुका साथै खानपानमा समेत विशेष ध्यान पुर्याउने गर्नु पर्छ । ध्यान दिँदासमेत यस्तो समस्या आएमा घरायसी उपचार अपनाउनुभन्दा पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञकोमा गइ उपचार गराएर डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ ।